အကောင်းဆုံး 2004 ကတည်းက Web ကိုဖိုရမ်
1. ဤ website ၏ content များအတွက်တာဝန်ယူမှု
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ပေါ်မှာဤ website ၏အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်တိကျမှုနှင့်လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ကွိုးစားနေကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့အထူးသဖြင့်တတိယပါတီများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်သောသူတို့အဘို့, ဒီ site ပေါ်တွင်အားလုံးအကြောင်းအရာများ၏မှန်ကန်မှုအဘို့မဆိုတာဝန်ယူမှုကိုလကျမခံနိုငျသညျ။ သက်ဆိုင်ရာဖိုရမ်များပိုင်ရှင်အော်ပရေတာသိမ်းဆည်းထားဖိုရမ်များနှင့်သိုလှောင်ထားသော archive ကိုစာမကျြနှာရဲ့ contents အတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်, ဒီသာပုဒ်မ 16 ECG hosting provider ကမှနည်းပညာဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းများနှင့်ထိုက်အညီထောက်ပံ့ပေးသည်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများအဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျပြဿနာသို့မဟုတ်တရားမဝင်အကြောင်းအရာသတိထားမိလျှင်, ငါတို့သည်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်သင့်အားမေးပါ, သင် Imprint အတွက်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
2. ဒီ site ပေါ်တွင်လင့်များများအတွက်တာဝန်ယူမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဟာသူတို့ရဲ့ content တွေကိုအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလင့်များပါရှိသည်ကျနော်တို့တာဝန်မယူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများမရှိပါအသိပညာခဲ့ရပြီးထိုကဲ့သို့တရားမဝင်ရှိသည်ကြောင့်နှင့်ဆက်စပ်ဆိုက်များအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုငါတို့အဘို့အ 17 ECG မဟုတ်§နှင့်ညီသည်သေးကျွန်တော်တို့ကိုသတိပြုမိကြသည်မဟုတ်ကျနော်တို့တရားမဝင်သတိထားဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ချက်ချင်းလင့်ခ်များကိုဖယ်ရှားလိမ့်မယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ပေါ်တွင်မည်သည့်တရားမဝင်လင့်များသတိထားမိခဲ့လျှင်, ငါတို့သည် Imprint အတွက်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်သင့်အားမေးကြည့်ပါ။
သငျသညျယခုဝက်ဘ်ဆိုက်များသွားရောက်ကြည့်ရှုပါလျှင်, အချို့သတင်းအချက်အလက်ကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးသိမ်းဆည်းအဖြစ်ဤ website ပေါ်မှာ။ သငျသညျယခုကဲ့သို့အကြှနျုပျတို့၏ website လာရောက်လည်ပတ်နေတယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web server သို့အလိုအလျောက်ယခင်ကသွားရောက်ခဲ့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၏ (ဒီ website မှာသိမ်းဆည်းထားရာပေါ်မှာကွန်ပျူတာ) ထိုသို့သောလိပ်စာအဖြစ်ဒေတာ (URL ကို) သင်, browser ကိုနဲ့ browser ဗားရှင်း, operating system ကိုအသုံးပြုကြသည်, ထိုလိပ်စာ (URL) ကယ်တင်တော်မူ၏ စာမျက်နှာ (referrer တို့ရဲ့ URL ကို), အိမ်ရှင်အမည်နှင့်ယင်းကိရိယာ၏ IP address ကိုရသောအဖြစ်ဖိုင်တွေ (web server ကိုမှတ်တမ်းဖိုင်များကို) တွင်ရက်စွဲနှင့်အချိန်ကနေဝင်ရောက်နေပါတယ်။ အများအားဖြင့် web server သို့ log files နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့ချန်ထားကြသည်, ထို့နောက်အလိုအလျှောက်ဖျက်ပစ်။ ကျနော်တို့ကဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်ဖော်ကြဘူးပေမယ့်ဒီဒေတာကိုတရားမဝင်အပြုအမူ၏ရှေ့တော်၌ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်ထွက်အုပျစိုးနိုငျပါဘူး။ အဆိုပါဥပဒေရေးရာအခြေခံပုဒ်မ6အညီဖြစ်ပါသည်, DSGVO,fအပိုဒ် 1 (အအပြောင်းအလဲနဲ့၏တရားဝင်မှု) အထဲတွင်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားကို web server ကိုမှတ်တမ်းဖိုင်များကိုဖော်ထုတ်မယ်ဖွငျ့ဤ site ၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးခွင့်ပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်အီလက်ထရောနစ်အတူတကွအချိန်နှင့်အတူကိုတဦးတည်းဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောပုံစံတင်သွင်းခဲ့တဲ့သို့မဟုတ်မှတ်ချက်များစဉ်အတွင်းသင့်အမည်, အီးမေးလိပ်စာ, လိပ်စာသို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအဖြစ်, ဒီ website တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်သွင်းကြောင်းအချက်အလက်များနှင့် IP address ကိုသာ ဖော်ပြထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြု, လုံလုံခြုံခြုံမဟုတျဘဲတတိယပါတီနှင့်အတူ shared သိမ်းဆည်းထား။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အထူးသအဆက်အသွယ်တောင်းဆိုရန်နှင့်ဤ website တွင်ကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်ကိုင်တွယ်ဘို့တဲ့သူတွေကိုဧည့်သည်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုမရထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့အဲဒီဒေတာတရားမဝင်အပြုအမူ၏ရှေ့တော်၌ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်ထွက်အုပျစိုးနိုငျပါဘူး။ သငျသညျ, အရှင်ကွာဒီ website ကနေ e-mail ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့လိုလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အချက်အလက်များ၏လုံခြုံတဲ့ဂီယာနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအာမခံလို့မရပါဘူး။ အကြှနျုပျတို့သညျ e-mail, ကနေတဆင့်လျှို့ဝှက်ဒေတာများထုတ်လွှင့်ဖို့ unencrypted ဘယ်တော့မှကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ အဆိုပါဥပဒေရေးရာအခြေခံအပိုဒ်6မှာများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်, အပိုဒ် 1 DSGVO (အပြောင်းအလဲနဲ့၏ lawfulness) သင်သင်ထည့်သွင်းဒေတာကို process မှသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်တစ်ဦးအလွတ်သဘောက e-mail ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းသည့်အချိန်တွင်မဆိုဒီသဘောတူညီခကျြကိုသုံးနိုင်သည်လုံလောက်, သင် Imprint ၌အကြှနျုပျတို့၏အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
5. privacy ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအောက်မှာခငြ့်အရေး
(မေ့လျော့ခံရဖို့ညာ) ကိုဖျက်ပစ်ရန်, ညာဘက်အပေါ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းမှ (အပိုဒ် 16 DSGVO) ညာဘက်လက်ျာဘက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏န့်အသတ်မှ (အပိုဒ် 17 DSGVO) (အပိုဒ်: အခြေခံအားဖြင့်သင်သည် DSGVO နှင့်သြစတြီးယားမှာ Data ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ (DPA), အောက်ပါအခွင့်အရေးများ၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာရှိ 18 DSGVO), ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကန့်သတ်များ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်သို့မဟုတ်ဖျက်မှု (ပုဒ်မ 19 DSGVO) နဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်အကြောင်းကြားစာလိုအပ်ချက်သတိပေးပိုင်ခွင့်, (အပိုဒ် 21 DSGVO) ၏ဒေတာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ (အပိုဒ် 20 DSGVO) ညာဘက်, ညာမဟုတ်သီးသန့်တစ်ဦးမှလက်ျာဘက် ပရိုဖိုင်, ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခြေခံ. (ကို item 22 DSGVO) အပါအဝင် automated အပြောင်းအလဲနဲ့, အကြောင်းမဲ့ရန်။ သင် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ချိုးဖောက်သို့မဟုတ် data ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတောင်းဆိုမှုများမဟုတ်ရင်တစ်လမ်းအတွက်ချိုးဖောက်ခဲ့ကြ, သင်သြစတြီးယားအတွက် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခွင့်အာဏာသောကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာမှတိုင်ကြားနိုင်မယုံကြည်ပါ။
6. cookies များကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုအသုံးပြုသူ-တိကျတဲ့အချက်အလက်များသည် HTTP သိမ်းထားဖို့ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ဦးက cookie ကိုဒီ Web Browser နဲ့ web server သို့အကြားလဲလှယ်သို့သော်လုံးဝအနတ္တသာက်ဘ်လျှောက်လွှာအဘို့, ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်တဲ့တိုတောင်းသောဒေတာများ packet ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ခတဲ့ဖိုရမ်, တစ်ဦးအဓိပ္ပာယ်ကိုသင်ယာယီဖိုရမ်သို့ logged သောအသုံးပြုသူအကောင့်အတွက်အဲဒီ session data တွေကိုသိုလှောင်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းကိုရရှိသွားတဲ့။ cookies တွေကိုနှစ်မျိုးရှိပါသည်: ပထမဦးစွာပါတီ cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ site မှဖန်တီးနေကြတယ်, Third-party cookies တွေကိုတခြားဆိုက်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးကြသည် (ဥပမာ Cloudflare ။ ) ။ ထို့ပြင်တွေ, cookies သုံးခုအမျိုးအစားရှိပါတယ်, သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းအပေါ်အခြေခံပြီးဒီဂုဏ်ထူး: တင်းကြပ်စွာလိုအပ်သော cookies များကိုထို site ၏အခြေခံအင်္ဂါရပ်များမှဝက်ဘ်ဆိုက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရန်သေချာအလုပ်လုပ်တဲ့ cookies များကိုဖြစ်စေအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံလျာထားသော cookies များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပါတီ cookies များကိုန်ဆောင်မှုများ၏စစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်နည်းပညာပိုင်းလိုအပ်သောဖြစ်ကြပြီးနောက်ထပ်ထိုကဲ့သို့သောသင့် IP လိပ်စာသို့မဟုတ်သင့် e-mail လိပ်စာအဖြစ်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုမရှိတော့အားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက် cookies တွေကို၏ Deactivate များအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာကတည်းကထိုကွောငျ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cookies များကို, § 96 ဆက်သွယ်ရေးအက်ဥပဒေ (TKG) အောက်ရှိကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ ယင်းအက်ဥပဒေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွင်းခွင့်ပြုချက်ထို့ကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ _data * _t * * _sid နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် xt_ddos_key, xt_fboff နှင့် xt_banman, Cloudflare ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားလမ်းကြောင်းလွှဲ session ကို login နဲ့ session ကိုဒေတာအတွက် cookies များကို, xt_dir နှင့် xt_rewrites အဖြစ် xt_cdn: အထူးသညျဤအောက်ပါပထမဦးဆုံးပါတီ cookies များကိုများမှာ သင့် browser setting ကို cookies များကို၌သငျမသန်စွမ်းလျှင်စေရန်နှင့် xt_cookiecheck ရဲ့ login မှလာမယ့်မှတ်စုတစ်ခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုသတိပေးမှအပေါ် mask ။ အဆိုပါ Third-party cookie ကို __cfduid တစ်နည်းပညာပိုင်းလိုအပ်သော cookie ကို Cloudflare ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ရရှိနိုင်မဟုတ်ရင်အာမခံမရမယ်လို့ကတည်းက DDoS တိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကာကွယ်ရန် Cloudflare ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါ။ ကွတ်ကီးကုန်ဆုံးသို့မဟုတ်သင်သင့် browser setting ကိုပေါ် မူတည်. သင့် browser ကိုပိတ်လိုက်သည့်အခါဖွစျနိုငျသောအရာကိုသူတို့အဖျက်ပစ်သည်အထိ၎င်း၏ယာယီတရားဝင်မှုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းရန်သင့် device ကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုယေဘုယျအားဖြင့် cookies တွေကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးဆိုရင်, ဆိုလိုသည်မှာ ဒီနိယာမတစ်ခု browser ကို setting ကို disable မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအချို့လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စာမကျြနှာအလုပ်မလုပ်လို့မရပါဘူး။
7. အဆိုပါ Apply သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ